Ụbọchị My Pet » Ọ na-achụ Ị? Lezienụ anya maka ihe ịrịba ama a!
emelitere ikpeazụ: Aug. 05 2020 | 3 min agụ
Ị nwere a Ihọd ị nwere mmasị ma na-adịghị n'aka nke mmetụta ya? Mgbe hụrụ onwe gị na-eche ihe ọ pụtara mgbe ọ na-eme ihe ụfọdụ ma ọ bụ na-eme a ụfọdụ ụzọ? Mgbe na-eche nke ihe ịrịba ama a mkpa ka ị anya maka ịma ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie-achụ gị?
Ọ bụrụ na ị zara kemkwenye niile ajụjụ ndị a, mgbe ahụ eleghị anya ị chọrọ a ole na ole Atụmatụ-enyere gị aka na-akwọpụ site na chọpụta ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie n'ime unu.
Ndi enye na-anya?
Ọ bụrụ na a Ihọd ị na-agwa okwu na-ekwusi anya ruo ogologo oge, mgbe ahụ ka nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ọ na-agbara gị dị ka nke ọma. Otú ọ dị, ihere ụmụ okorobịa nwekwara ike jide anya, albeit maka obere oge.
Bụ na a ime ihiere?
Unu na-eleghara ihe ihere Ihọd dị ka-apụghị ịbanye abanye. Ọ bụrụ na ọ blushes mgbe ọ bụla ị na-gburugburu, mgbe ahụ, e gị cue na-amalite anya a mkparịta ụka ma na-enyere ndị Ihọd dị ka ọ nwere ike na-anwụ anwụ na-agwa gị okwu. Ọbụna ụmụ okorobịa ndị na-adịghị eme ihere, keihiere na-maa a mma ịrịba ama n'ihi na aghụghọ ndumodu nke ya nwere mmasị n'ebe ị.
Ya akwara na-ewere n'elu?
Mgbe-eche ihe mere na Ihọd mgbe yiri aghariigha mgbe gburugburu gị? Ọfọn, o nwere ike ọ bụghị mgbe niile n'ihi na ọ chọrọ ịhapụ. Ndị a bụ nanị ya akwara na-ewere n'elu dị ka ọ na-anwa na mkpokọta obi ike ịgwa gị.
Ndi ya nku anya zụlitere?
Ọ bụ ezie na a Ihọd na mmasị i nwere ike na-agbalị izochi anya mgbe ekwu okwu gị, ọ bụrụ na ọ na-eweta ya na iku anya na agbasapụwo anya, mgbe ahụ ka bụ ihe ịrịba ama na ọ na-achụ gị.
Ọ ịbụ a copycat?
Nke a bụ nnọọ akpali eziokwu. Ọ bụrụ na ọ na-achụ gị, ọ ga-onkonshiosli idetuo ihe ị na-eme. Ị chọpụtawo na mgbe ọ bụla ị na-akpali gị n'aka site ntutu gị, aka ya na-akpali ya ntutu isi kwa? Ma ọ bụ ọbụna mgbe ị na-ịgbanwee gị ụkwụ, ọ na-eme kwa? Ọ bụ anwansi nke flirting na ndị a bụ ụfọdụ nke ihe ịrịba ama gị mkpa anya maka.
Ndi enye tilt isi ya?
Ọ dịtụwo mgbe ị chọpụtara na nwa okorobịa tilting isi ya kwupụta gị ka ị na-agwa ya okwu? Ọ pụtara na ọ na-enwe mmasị gị na a na-enyịn, ka ọ ghara ifunahụ na ihe ọ bụla ị na-ekwu.
Enwere ọnụ ọchị egwu na egbugbere ọnụ ya?
A Ihọd bụ mmasị na ị ga-amụmụ ọnụ ọchị gị dị ka ihe ịrịba ama na ọ chọrọ ịgwa gị okwu. Ya mere, ewere ya dị ka ihe na-agba na-amalite mkparịta ụka.
Ndi enye ada akimbo?
A Ihọd onye na-agbara gị ga na-agbalị iji gosi na ị na ha bụ ndị onwe-obi ike site guzo na aka-etinye na hips, ma ọ bụ ọbụna isi mkpịsị aka enịm ke loops nke ya na ájị ya. Nke a na-ịrịba ama nwere ike ghara ịbụ na doro anya, ma ọ nwere ike na-eme ka a na ndu.
Ya ụmụ akwụkwọ ikpọ?
Ndi ị maara na ọ bụrụ na ị na-amasị onye, gị ụmụ akwụkwọ mụbaa ma ọ bụrụ na ị na-eme ọ bụghị, ha nkwekọrịta? N'iburu nke a n'uche, ihe niile ị chọrọ ime bụ anya na anya ya dị ka i nwere a mkparịta ụka. Ọ bụrụ na ha saa mbara, mgbe ahụ, ị ​​maara na ọ bụ ndị nwere mmasị.
Ndi enye nnọọ imetụ gị aka?
Ọ Ihọd mgbe nyere gị a rọrọ aka, ọbụna dị ka o na-aga site? Mgbe ahụ, ọ bụ maa mmasị n'ebe ị na chọrọ weghara uche gị. Otú ọ dị, lezienụ anya maka ndị na creeps ndị, ọma, dị nnọọ creeps onye chọrọ igwu gburugburu na a mmekọrịta. Ị maara ihe m chere, ị chọghị?
Ebe ọ bụ na gị ugbu a ịghọta ihe ịrịba ama iji anya n'ihi na n'otu ntabi mara na ọ bụrụ na ọ na-achụ gị, ọ bụ oge na-ehi site na mpi. Ekwela ka ohere agafe gị site!